PressReader - Isolezwe: 2018-09-13 - Isaqhubeka inkinga yamatekisi aya esibhedlela iRK Khan
Isaqhubeka inkinga yamatekisi aya esibhedlela iRK Khan
SEBEQALA eThekwini abantu abakhele izindawo ezizungeze iPinetown uma befuna ukuya esibhedlela esiseChatsworth, iRK Khan njengoba kungekho tekisi evunyelwe ukuya kuso.
Ezinyangeni ezedlule Isolezwe belilokhu libika ngombango womzila oya eChatsworth ophakathi kukasoseshini waKwaSanti/Klaarwater neChatsworth Minibus.
Selokhu uqalile umbango abantu abasuka KwaSanti naseKlaarwater abafuna ukuya esibhedlela iRK Khan bashiywa ngamatekisi ngaphansi kwebhuloho elingenela e-unit 5 eChatsworth.
Abasuka koMolweni, Nqetho, KwaNyuswa, Clermont nezinye izindawo ezizungeze iPinetown sebephoqeleka ukuthi baqale eThekwini bese bexhuma itekisi eya eChatsworth noma sebegoduka kuba yiso leso.
Abafundi beSolezwe abacele ukungadalulwa bathe ekuqaleni bebethuthwa ngamatekisi kasoseshini wasePinetown abayise eChatsworth kodwa nawo awasabayisi eRK Khan njengoba kuqhubeka lo mbango.
“Asisazi ukuthi sizokhala kubani manje ngoba asisenawo amatekisi asuka ePinetown aye eRK Khan, siphoqeleka ukuthi siqale eThekwini. Lokhu kudla imali eningi ngoba akubizi ukusuka ezindaweni zethu siye ePinetown kodwa ukusukela ezindaweni zethu siye eThekwini bese sixhuma amanye amatekisi aya eRK Khan kuyabiza. Sicela umhlonishwa u(Mxolisi) Kaunda asilekelele, siyafa wukukhokha,” kusho omunye umgibeli.
Isolezwe lithinte uSihlalo kasoseshini wasePinetown uMnuz Bheki Mbambo okuwusoseshini obusiza ngokuthutha abantu bezindawo ezakhele iPinetown ukuthi baye esibhedlela iRK Khan.
UMbambo uthe amatekisi asePinetown nawo awasakwazi ukuyisa abantu eRK Khan ngoba abemiswa ngamaphoyisa awafune izimvume zokusebenza kulo mzila waseChatsworth kuthi uma abashayeli bechaza ukuthi kunohlelo lokusiza umphakathi obelwenziwe yiSantaco eDurban West baboshwe.
UMbambo uthe kubuhlungu ukuthi abantu abakhele izindawo ezizungeze iPinetown abakwazi ukuya eRK Khan, eChatsworth kodwa abantu baseChatsworth bathuthwa ngamabhasi agadwa ngamaphoyisa uma esenkabeni yePinetown.
Uthe kuyabathusa ukuthi amabhasi aseChatsworth agadwa ngamaphoyisa uma eya ePinetown ekubeni amatekisi abanga umzila engakaze agadwe.
“Sikhathazekile ngokungaphathwa ngendlela engafani kwezinhlanga zaseNingizimu Afrika. Ngesonto eledlule sibone amabhasi asuka eChatsworth egadwe ngamaphoyisa ePinetown, asikaze sibone amatekisi egadwa ngamaphoyisa uma eya eChatsworth njengoba abantu sebedilizwa ngaphansi kwebhuloho elingaphephile. Kubuhlungu ukuthi awekho amabhasi namatekisi avumeleke ukuya eChatsworth kodwa amabhasi aseChatsworth angena ngokukhululeka ePinetown,” kusho uMbambo.
Uthe kuyimanje abantu abadinga ukuya esibhedlela iRK Khan esiseChatsworth abakwazi ukuthi bagibele amatekisi azobasusa ePinetown abayise kulesi sibhedlela kodwa baphoqeleka ukuthi bagibele azobashiya eThekwini bese bexhuma azobayisa eRK Khan.
AboMnyango wezokuThutha bebengakaphenduli i-email abayithunyelelwe ngalolu daba.